Sucuudiga oo sheegay in la qabtay unugyo argagixiso ah | Baydhabo Online
Maamulka Sucuudiga ayaa sheegay in ay qabteen 18 qof oo ay ku jiraan laba Yemeniyiin ah iyo mid Suudaani ahi, kuwaas oo ka tirsanaa afar unug oo argagixiso ah xidhiidhna la leh kooxda la baxday Dawladda Islaamka.
Wakaaladda wararka Sucuudiga oo soo xigatay af-hayeen u hadlay wasaaradda arimaha gudaha ayaa sheegtay in shakhsiyaadkaasi qarin jireen dad ay ciidamada nabad gelyadu ku raad joogeen oo ay ka mid ahaayeen laba qof oo isku qarxiyey bishii hore gobolka Jidda.
Waxaanu intaa ku daray in dadka la qabtay ay ilaalaynayeen goobo muhiim ah oo dawladdu leedahay oo ay wararkana internet-ka ugu gudbinayeen kooxda Dawladda Islaamka la baxday.
Hawl galkan oo socday maalmo ayaa sidoo kale lagu soo qabtay tiro hubka darardoorriga u dhaca ah iyo in ka badan laba milyan oo Riyaal oo lacag ah, sida uu sheegay sarkaalkaa u hadlay wasaaradda arimaha guduhu.
Bishii hore ayay maamulka Sucuudigu qabteen 13 qof oo Pakistani ah iyo 3 Sucuudiyiin ah oo lagu tuhunsanyahay inay ku lug lahaayeen weerarro miidaamo ahaa.
Laga soo bilaabo dabayaaqadii sannadkii 2014 Sucuudiga waxa soo maray weeraro dhiig ku daatay oo badankooda lala beegsanayey askarta ciidamada nabad gelyada iyo muwaadiniinta Shiicada ah. Weerarradaa badankooda waxa sheegtay in ay ka dambeeyeen kooxda la baxday Dawladda Islaamka.